Mety hiatrika telo taona an-tranomaizina ilay Rosiana bilaogera LiveJournal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2019 4:33 GMT
Mety higadra telo taona an-tranomaizina (Azafady vakio ny tantara manontolo ato amin'ny Global Voices) ilay bilaogera Rosiana 23 taona, Dmitry Shirinkin, izay nanoratra tantara foronina tao amin'ny bilaoginy aingam-panahy tamin'ny fakàna sary tao Virginia Tech. Nitantana ny bilaogy LiveJournal i Dmitry Shirinkin tamin'ny lohateny hoe tetraox ary nanoratra momba ny fividianana basy sy famonoana olona maromaro tao amin'ny iray amin'ireo anjerimanontolo ao an-tanàna. Voampanga ho “nanaitra fisian'ny fandrahonana fampihorohoroana amim-pahadisoana” izy.
“Nandinika ny bilaogin'i Dmitry ny biraon'ny mpampanoa lalàna ary nahita fa naniry hitifitra olona am-polony izy”, hoy ny tatitry ny Russia Today. Na izany aza, nangataka mpandalina fiteny ny mpisolovavan'i Shirinkin mba hanome ny heviny amin'ny maha-manampahaizana azy amin'ity lahatsoratra mampiady hevitra ity. Nahemotra amin'ny 20 septambra ny fitsarana.
Bilaogera Livejournal Rosiana iray hafa koa no miatrika sazy roa taona an-tranomaizina na onitra 100.000-robla (4000 dolara) noho ny “fandrisihana fankahalàna” polisy. Araka ny voalazan'ny mpampanoa lalàna ara-paritra, Komi, ilay hafatr'i Sawa Terentyev, 21 taona izay voalaza fa manafintohina – ary efa nesorina tao amin'ny tranokala – dia ahitana “antso mivantana mikendry handrisika fankahalana na fanoherana, ary koa manimba ny fahamendrehan'ny … vondrona ara-tsosialy manokana: ny polisy. “